यि महिलाको कपाल धुन बोतल स्याम्पु लाग्ला ? « Etajakhabar
यि महिलाको कपाल धुन बोतल स्याम्पु लाग्ला ?
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:०४
एजेन्सी / सामान्यत लामो कपाल महिलाको सौन्दर्यताको प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । तर यि महिलाको कपाल यति लामो छ कि सुन्दै अचम्म परिन्छ ।
यि महिलालाई आफ्नो कपाल एक पटक मात्र धुनको लागि ६ बोटल त स्याम्फु मात्रै लाग्छ । कपाल पुर्ण रुपमा सुक्न मात्रै कम्तिमा दुइ दिन लाग्छ । कपालको तौल मात्रै २० केजी छ । र लम्बाइ ५५ फिट लामो छ । गाडिमा हिड्दा आफु साइडको सिट कपाल राख्नको लागि प्रयोग हुन्छ । अहिले यि महिलाले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा समेत किर्तिमान राखिसकेकी छन् ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने आशा मंडेलाले कपाल अध्याधिक लामो र जकडिएकै कारण २५ वर्ष यता काइँयो प्रयोग समेत गरेकी छैनन् । बढी लामो भएकै कारण उनको लामोसमयसम्म विवाह समेत हुन सकेन । तर हेयर ड्रेसर इमानुएल शेगले भने उनीसँग विवाह लागि प्रस्ताव राखे र उनीहरुको विवाह भयो ।
कपालकै कारण नियमित काम गर्न नसक्ने आशाको कमाइ भने गजबको छ । यहि कपालकै कारण वर्षेनी लाखौ डलर कमाउछिन उनी । उनलाई हेयर प्रोडक्टर अनि एसेसरिज कम्पनीले महंगो पैसामा आफ्नो विज्ञापनका लागि अनुबन्ध गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौमा एक उच्च अधिकारीमा कोरोना पुष्टि नाम गोप्य राखियो
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १७:२२